Otu esi etinye Firefox na-esote (Beta) ma ọ bụ Firefox Quantum (abalị) na Desktọpụ Ubuntu - LinuxCapable
Maka ọtụtụ akụkụ, Firefox na-enwekarị ọhụụ na ntọhapụ kwụsiri ike na desktọpụ Ubuntu dabere na agbanyeghị, enwere ike ịwụnye ya ma nwalee atụmatụ ọhụrụ ma ọ bụ nwalee weebụsaịtị gị tupu oge eruo. ọ na-adaba n'ụlọ nkwakọba ihe kwụsiri ike.
Mozilla Firefox 95.0b3
Ma nke ahụ bụ ya. Ị ewepụla ihe arụrụ n'abalị na desktọpụ Ubuntu gị nke ọma.
Nhọrọ nke abụọ maka ndị chọrọ ịnwale onye nrụpụta ihe na-agba ọbara nke Firefox, nke akpọrọ Firefox Quantum Nightly, ị ga-achọ itinye ya na ppa:ubuntu-mozilla-dayly/ppa. Otu uru maka ụlọ ndị a na-ewu kwa abalị bụ nke ahụ Awụnyere Quantum Firefox dị iche na ụlọ kwụsiri ike yana beta na-ewuli elu.
Akara ngosi Firefox Quantum Nightly ga-adị iche na akara ngosi Firefox ọkọlọtọ. Ọbụna agba dị nnọọ iche.
N'ime nkuzi a, ị mụtala ka esi etinye Firefox Next (Beta), yana Firefox Quantum (Nightly) na-ewuli na desktọpụ Ubuntu gị. Cheta, ka ị na-anwale njirimara ọhụrụ na-atọ ụtọ, ha na-abụkarị ndị na-adịghị akwụsi ike, na obi abụọ adịghị ya na ha nwere ụfọdụ ahụhụ nwere ike ịkpata nsogbu nchekwa.
Categories Ubuntu Tags gburugburu Desktọpụ Mail igodo